January 23, 2020 - khitalinmedia
January 23, 2020 Khitalin Media 0
ရေသန့်ဘူးတွေ တံဆိပ်ပေါင်းစုံ နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူလို့ရနေတော့ သတိမထားဘဲ ဒီလိုပဲ သောက်သုံးနေကြတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ ။ သို့သော်လည်း ပလက်စတစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဒီရေသန့်ဘူးတွေဟာ အမှန်တကယ်ရော စိတ်ချမှု ရှိရဲ့လား ၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်လားဆိုတာကို ဂရုမပြုမိကြပါဘူး ။ ရေသန့်ဝယ်တဲ့အခါ ဘူးရဲ့ အောက်ပိုင်းကို သေချာကြည့်ကြည်ပါ […]
မျက် မမြင် နားမကြားပေမယ့် နာမည်ကျော်စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဟယ်လင်ကဲလားရဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်ကြီးကြားဖူးကြမှာပါ။ တ က္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာ ပြဌာန်းစာအုပ်မှာပါ ပြဌာန်းခြင်းခံရတဲ့ လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ပုံနဲ့ သူမပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို အခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ သူမဟာ စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှုပြီး တေးဂီတတွေနားထောင်ရတာနှစ်သက်ပေမယ့် သူမနေထိုင်ရတာတော့ မှောင်မည်းတိတ်ဆိတ်တဲ့ ကမ္ဘာငယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ထိတွေ့မှုကို […]
” မိဘများ သင့်သင့်မြတ်မြတ်နေကြရန် သေတမ်းစာရေးပြီး ကျောင်းသားတစ်ဦး ”တံတားပေါ်မှခုန်ချမှုဖြစ်ပွား …
မိဘများ သင့်သင့်မြတ်မြတ်နေကြရန် သေတမ်းစာရေးပြီး ကျောင်းသားတစ်ဦး တံတားပေါ်မှခုန်ချမှုဖြစ်ပွား လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီဝက်လောက်ကပါ…စစ်ကိုင်းတံတားအသစ်…မန္တလေးဘက်ခြမ်း ၁ဂုံးမြောက်မှလူတစ်ဦးခုန်ချကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိ။ ယောက်ျားလေးပါ နာမည် ရဲဝင်းကျော်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ ကျောက်ဆည်ကတတိယနှစ်ကျောင်းသားပါ ဆိုင်ကယ်နံပတ်မှာ ၁ယ/၂၀၈၁၉ ဖြစ်ပါတယ် နေရပ်က ကျွဲဆည်ကန် ၁၁လမ်းလို့ သတင်းရ သက်ဆိုင်သူများ သိအောင် share ပေးပါဦးနော်….. Source […]
အချစ်သစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကို ချပြလိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ
ပရိသတ်ကြီးအချစ်တော် ပန်ကိတ်ဒါဒါ ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်အစားဆုံးအချက်လို့ ပြောရမှာပါ။ ချစ်သူဟောင်း နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ရွှေထူးနဲ့ လမ်းခွဲပြတ်ဆဲပြီးတဲ့အချိန်ကတည်းက ပန်ကိတ်ကတော့ တစ်ကိုယ်တည်း အေးဆေးစွာ နေထိုင်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ သူမအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို တင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားသံဝဲဝဲလေးနဲ့ အရုပ်မလေးလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ […]
အမျိုးသမီးများတကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးလို့ရှက်စရာလို့ မယူဆဘဲ ကျန်းမာရေးအတွက် ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားပါနော်
(အမျိုး သမီးထု တကိုယ်ရေးသန်ရှင်းကျမ္မာရေးအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးလို့ရှက်စရာလို့ မယူဆဘဲ၊ဒီသတင်းကို မိမိရဲ့မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်းများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန်မျှဝေအသိပေးကြပါ) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားရှိ Tata Cancer Hospital(ခေါ်)ကင်ဆာဆေးရုံ မှ အမျိုးသမီးများအတွက် ကျမ္မာရေးအသိပေးနှိုး ဆော်ထားချက်ကို မျှဝေလိုက်ပါရစေ။ အဲဒီဆေးရုံမှာ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ […]
G FATT က နန်းဆု မှာနောက်ရည်းစား တစ်ယောက်ရနေပြီ လို့ပြောတဲ့ အပေါ် ပြန် လည်တုံ့ပြန် လာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
အ ဆိုတော် စုံတွဲလေးဖြစ်တဲ့ G-Fatt နဲ့ နန်းစုရတီစိုးတို့ အတွဲကတော့ နားလည်မှုတွေမပေးနိုင်တော့တာကြောင့် လမ်းခွဲပြတ်စဲခဲ့ကြတာ အားလုံး အသိပါနော် … လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးသား ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်မီဒီယာတွေက G-Fatt နဲ့ နန်းစုရတီစိုးကို အမြဲတမ်း အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးမြန်းလေ့ရှိပါတယ်။ အ ဆိုတော […]
မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ “ရညျးစားမထားနဲ့” ဆိုတဲ့ စကားကို လူငယျအမြားစု ရငျးနှီးကွမယျ ထငျပါတယျ။ ကြောငျးတကျတုနျး ရညျးစားထားရငျ ကြောငျးစာ ထိခိုကျမယျ၊ ပကျြစီးမယျ ဆိုတဲ့ တဈခြို့သော အယူအဆလေးတှကေ အခုထိတိုငျ ရှိနဆေဲပါပဲ။ အရာရာတိုငျးမှာ အကောငျးအဆိုး ဆိုတာ ရှိသလိုပဲ ဒီကိစ်စမှာလညျး တဈခြို့နရောတှမှော ကောငျးတဲ့အခကျြတှေ ရှိမယျ၊ […]
မိဘဆိုတာ မိမိသားသမီးအပျေါ ဘယျလိုအနအေထားဖွဈနပေါစေ မစှနျ့ပဈရကျ မရကျစကျရကျသူတှပေါ…ဒါပမေဲ့ ခုပွောမဲ့အဖွဈအပကျြလေးကတော့ ဖခငျတဈဦးကနေ မိမိသမီးဖွဈသူကို ရကျရကျစကျစကျ ပွုလုပျဆုံးမခဲ့တာပါ…. အဲတာကတော့ ၁၆ နှဈအရှယျ သမီးဖွဈသူဟာ မိနျးမခငျြး ခဈြကွိုကျနတေယျကို သိရှိသှားတဲ့ အသကျ ၅၄ နှဈအရှယျ ဖခငျဖွဈသူက အဆိုပါသမီးအပွငျ နောကျထပျသမီးတဈဦးကိုပါ အဓမ်မပွုကငျြ့ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ… […]
လုပ်ရက်လိုက်တာဗျာ. . .ဘယ်လိုလူက လုပ်သွားတယ်မသိဘူးကောင်မလေး လမ်းဘေးမှာသတိလက်လွတ်ဖြစ်နေပြီ(ရုပ်သံ)
ဒီ​နေ့ ​မြောက်ဒဂုံ ပင်လုံစီးတီးမတ် ​ရှေ့က ငါးမာန်​အောင်ဘုရားဘက်သွားတဲ့ လမ်း​ပေါ်မှာ မိန်းမငယ်​လေးတဦး ​နေပူထဲလဲ​နေခဲ့တာပါ … ။ ဒီမိန်းက​လေးကို ဒီဓါတ်ပုံပါ မတ်တပ်ရပ်​နေတဲ့ခရီးသွားအကိုနှစ်​ယောက်က ​နေပူသက်သာ​အောင်ခန္ဓါကိုယ်နဲ့အရိပ်မိုး​ပေးထားပြီး ရဲနဲ့ ​ဆေးရုံကားကို​ခေါ်​ပေးခဲ့ပါတယ် … ။ တက်စီသမားတ​ယောက်​ဆေးတလုံးတိုက်လို့​​သောက်မိတယ်​ပြောပြီး..နာမည်နဲ့ ​ကျောင်းကို​ ​ပြော​တော့​ပြောပါတယ်..​ လျှောက်​ပြော​နေတာဖြစ်နိုင်လို့ မတင်​တော့ပါဘူးခင်ဗျာ … ။ […]
ဆက်ထုံးများတဲ့ကြိုး ခဏခဏပြတ်လွန်းတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းကိုနှမြောတဲ့စိတ်တခုနဲ့ ပြန်ပြန်ချည်မိတတ်ကြတယ်။ တခါချည်လိုက်တိုင်း အထုံးလေးတခု၊တခုနဲ့ဆက်ထုံးလေးတွေများလာခဲ့တယ်။ ဆုပ်ကိုင်ကြည့်လိုက်တိုင်း အဖုအထစ်ဆက်ထုံးတွေက မချောမွေ့တော့သလို၊အမြင်လည်းမလှခံနိုင်အားလည်းနည်းသထက်နည်းလာတတ်တာ သဘာဝပါ။ ဒီလိုပါပဲ ခဏခဏအမြင်မတူ၊အတ္တ၊မာနလွန်ဆွဲပွဲလို အဖုအထစ်တွေအများကြီးနဲ့Relationတခုမှာလည်း ဆက်ထုံးလေးတွေများနေမှာပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မူတွေလျော့နည်းလာစေတယ်။ ရန်ဖြစ်၊ပြန်ချစ်ဆိုကြပေမဲ့ ခဏခဏတစ်ယောက်စီရဲ့အတ္တကိုထိတတ်လာတဲ့အကြိမ်တွေများလာခဲ့တဲ့အခါ ဘယ်လောက်ခိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုး ဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တတ်ကြတာသတိရစေချင်မိတယ်။ ချစ်သူ၊ခင်သူတွေကြားဆက်ထုံးလေးတွေကြောင့်ဝေးကွားခြင်းမျိူးတွေကင်းဝေးပါစေ။ဆက်ထုံးများတဲ့ကြိုးဆိုတာအမြင်မလှသလို ရေရှည်ခံနိုင်အားလည်းနည်းတတ်တာမို့သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ♥မီမို unicode ဆကျထုံးမြားတဲ့ကွိုး […]